Mafekitori maviri eSony ekugadzirwa kwayo nekudengenyeka kwenyika | IPhone nhau
Nguva dzese panotangwa iPhone nyowani, panova nekutaura kwedambudziko rinodzivirira ipapo kubva pakuva nemasheya akakwana kudiwa kwekutanga. Ini ndinorangarira kuti sekureva kwaApple, iro jena jena reiyo iPhone 4 raive rakanyanya kunetsa kuwana kupfuura iro dema dema, iyo Touch ID yainetsawo kugadzira uye iyo 3D Kubata skrini yaifanirwa kugadzirwa nechengetedzo yakawanda kupfuura zvakajairwa skrini, saka ipapo vanogara vari matambudziko mukutangisa iyo nyowani iPhone. Dambudziko ripi rinogona kuoneka gore rino? Unogona kuva nechokuita nazvo Sony uye kamera ye iPhone 7.
Sevazhinji vevaverengi veNhau dze iPhone vachatoziva, imwe yenyaya dzinowanzoitika nezve iyo iPhone 7 inovimbisa kuti inotevera smartphone paapuro ichave ne mbiri kamera, kana imwe yemhando yavo inogona kunge iri iyo iPhone 7. Pro Kuva chinhu chavasina kugadzira zvisati zvaitika, zvingangodaro kuti pakutanga zvinovabhadhara zvakanyanya kupfuura mune ramangwana, uye zvimwe kana tichifunga izvozvo mafekitori maviri eSony amisa kugadzirwa kwavo nekuda kwekudengenyeka kwenyika kuchangobva kuitika munyika yeAsia.
Sony yemafekitori ayo maviri. Zvichakanganisa kugadzirwa kweiyo iPhone 7?
Kunge angangoita ese makwikwi mune ayo epakati-akakwirira maseru, malensi eiyo iPhone anopihwa naSony. Kuva ingangoita mwedzi mitatu kubva pakutanga kwekugadzirwa kwakawanda kweiyo iPhone 7, parizvino ivo vanofanirwa kunge vachigadzira izvo zvinhu zvavanotanga kuungana mukupera kwaChikunguru kana kutanga kwaNyamavhuvhu. Kunyangwe kana kwete ivo vaigadzira malenzi eiyo iPhone 7, Sony yave nayo kugadzirwa kwakamira pane zvirimwa pachitsuwa cheKyūshū neKumamoto nekuda kwekudengenyeka kwenyika kuchangobva kuitika muJapan.
Kana zvirimwa zvikasadzokera mukugadzirwa munguva pfupi, kuvhurwa kwemidziyo mizhinji kunogona kukanganiswa, nekuti ingangoita 40% yemusika inoshandisa masensa emifananidzo eSony. Asi, sezvinei, mutauriri wekambani yeJapan akatosimbisa izvozvo munguva pfupi ivo vanozogadzira zvakajairika zvakare, saka kana iyo iPhone 7 kana chero chishandiso chaisazokanganiswa. Ini handidi kupedzisa iyi posvo ndichiti aya ndiwo mashoko akanaka, kana zvisiri kushuvira kuti vese vagari veJapan vaite nepese pavanogona napo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mafekitori maviri eSony anomisa kugadzirwa nekuda kwekudengenyeka kwenyika; inogona kukanganisa iPhone